Semalt वाच: मालवेयर र अन्य घोटालाहरू कसरी रोक्न सकिन्छ
अनलाईन स्क्यामरले १२ अरब भन्दा बढी चोरी गरिसकेका छन, र तिनीहरू चोरीलाई कायम राख्नको लागि दृढ संकल्प गर्दछन्। तिनीहरूले वृद्ध व्यक्तिहरूलाई सबैभन्दा कमजोर लक्ष्यको रूपमा भेट्टाए। त्यहाँ तिनीहरू केहि तरिकाहरू प्रयोग गर्छन्।
माइकल ब्राउन, Semalt बाट अग्रणी विशेषज्ञ, खतरनाक मालवेयर आक्रमणबाट बच्न कसरी बताउँछन्।
१. नि: शुल्क सामान
जब तपाइँ ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ, तपाइँ विज्ञापनहरू मार्फत आउन सक्नुहुन्छ भनेर बताउन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँ सित्तैमा पाउनुहुनेछ। यो नि: शुल्क बर्गर हुन सक्छ, र तपाइँ अति भोकाउनुभएको छ। यसको लागि झर्नु हुँदैन। यदि तपाइँ विज्ञापन वा लि on्कमा क्लिक गर्नुहुन्छ, यसले पृष्ठ खोल्नेछ जुन तपाइँको कम्प्युटरमा मालवेयर डाउनलोड गर्दछ वा व्यक्तिगत डेटा खानी गर्दछ।
केहि उदाहरणहरूमा, पृष्ठ तपाईंलाई भर्ने फारमको साथ प्रस्तुत गर्दछ। जानकारी ह्याकरहरू द्वारा प्रयोग गरिनेछ।
यी विज्ञापनहरूमा क्लिक नगर्नुहोस्। जाँच गर्नुहोस् कि यी प्रस्तावहरू सही छन् कि गुगलमा खोजेर, वैध वेबसाइटमा जाँदा वा तथ्यहरू साइटहरूमा जस्तै स्नोपहरू।
२. घोटाला गर्ने शोक गर्नेहरू
केही विपक्षले शोकमा डुबेका व्यक्तिहरू खोज्छन्, अधिकतर विधवाहरू। तिनीहरूले मितव्ययी पृष्ठहरू पढ्छन् र मृतकको नजिकको बाँच्ने सम्बन्ध भेट्टाउँछन्। स्क्यामरले एउटा बैंकमा काम गर्ने बहाना गर्छ र त्यसपछि नजिकको आफन्तलाई बोलाउँछ। यो भेष मार्फत कोनले व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त गर्दछ। यस जानकारीको साथ, स्क्यामरले शोकमा डुबेका छन्।
यदि यस्तो अवस्थामा, वित्तीय समस्याहरू सम्हाल्नबाट बच्नुहोस् किनकि तपाईं कमजोर हुनुहुन्छ र स्क्यामरहरू त्यहाँ लक्षित छन्। कलहरू र ईमेलहरूमा सावधानीपूर्वक अनुसरण गर्नुहोस् जब तपाईंले शोक समाप्त गर्नुभयो।
I. IRS घोटाला
केहि स्क्यामरहरू आईआरएसको लागि काम गर्ने नाटक गरेर कल गर्दछन्। यो एक शीर्ष घोटाला हो। कल गर्नेले दावी गर्छ कि तपाइँ IRS केहि पैसा तिर्नु हुन्छ, सामान्यतया कर फिर्ता।
तिनीहरू तपाईंलाई एक विशिष्ट खातामा तुरून्त पैसा तार गर्न सोध्छन्, वा तपाईंलाई पक्राउ गरेर चार्ज गरिनेछ। यसलाई झिक्नको लागि, स्क्यामरहरूले तपाईंको सामाजिक सुरक्षा नम्बर जस्ता गोप्य जानकारी प्रयोग गर्न सक्दछन् जुन तपाईंलाई विश्वास गर्न छन कि तिनीहरू वास्तवमै आईआरएसको लागि काम गर्छन्। वैकल्पिक विधि जुन प्रयोगको विपक्षमा यो दाबी गर्नुपर्दछ कि आईआरएसले तपाईंलाई केही पैसा फिर्ता गर्दछ केही व्यक्तिगत दिए पछि कल गर्नेलाई जानकारी।
आईआरएस सामान्यत: हुलाक सेवा मार्फत कुराकानी गर्दछ र यदि तपाईंले कल प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईं confirm००-8२ -10 -१०40० लाई कल गरेर वास्तविक हुन सक्नुहुनेछ जुन आईआरएस टेलिफोन नम्बर हो।
Health. स्वास्थ्य सेवा घोटाला
तपाईंको सामाजिक सुरक्षा नम्बरले तपाईंको मेडिकेयर नम्बरको रूपमा पनि काम गर्दछ र स्क्यामरहरू यस जानकारीलाई लक्षित गर्दछ र तपाईंलाई चाँडै नै शुल्क लाग्न सक्छ जुन तपाईंले खर्च गर्नुभएन।
नम्बर सुरक्षित गर्नुहोस्, यसलाई गोप्य राख्नुहोस्। यदि तपाईंले कुनै अज्ञात गतिविधि देख्नुभयो भने, तुरून्त तपाईंको स्वास्थ्य बीमालाई सूचित गर्नुहोस्। Scammers फिशिंग कल मार्फत तपाइँको सामाजिक सुरक्षा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू प्रायः स्वास्थ्य बीमा बजारबाट कल गर्ने दाबी गर्छन्। सरकारी एजेन्सीहरू चिसो कल गर्दैनन् र व्यक्तिगत जानकारीको लागि सोध्छन्। यदि तपाईंले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारीको लागि सोध्ने कलर भेट्नुभयो भने, पर्खनुहोस्।
S. मौन कल
तपाई आफ्नो ओछ्यानमा चल्दै हुनुहुन्छ र फोनको घण्टी बज्दा तपाईंको मनपर्ने कार्यक्रमको मजा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईं उठाउनुहोस् र "नमस्ते" भन्नुहोस्। कोही उत्तर दिँदैन। यो एक रोबोट कल हो, सम्भावित लक्ष्यहरू रुजु गर्न को लागी। तपाईं कलर आईडी प्रयोग गरेर यसलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछ। साथै, अज्ञात कलहरूको उत्तर नदिनुहोस्। एक वास्तविक कलरले प्राय: तपाइँको उत्तर मेसिनमा सन्देश छोड्नेछ।
Private. निजी जानकारी मा व्यापार
तपाईंको संवेदनशील जानकारीलाई विलाई स्क्यामरको हातबाट टाढा राख्न तपाईंको उत्तम प्रयासको बाबजुद, तिनीहरूले तपाईंको विवरण यसबाट प्राप्त गर्न सक्छन्:
बेइमान कम्पनीहरू जसले उनीहरूका ग्राहकहरूको जानकारी बेच्छन
अन्य स्क्यामरहरू जसले तपाईंलाई स्क्याम्ड गर्न असफल भएका छन् वा सफल वा असफल भएका हुन सक्छन्
नक्कली स्वीपस्टेक्स र सर्वेक्षणहरू जहाँ तपाईं आफ्नो विवरणहरू भर्नु पर्छ।
यी सबै स्केमरहरूको लागि स्रोत केन्द्रको एक प्रकार हो। सतर्क हुनुहोस्।